Naya course » राप्तीसोनारी २ को आईसुलेसन सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी बिहिन राप्तीसोनारी २ को आईसुलेसन सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी बिहिन – Naya course
राप्तीसोनारी २ को आईसुलेसन सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी बिहिन
कोहलपुर/ राप्तिसोनारी गाँउपालिका वडा नं. २ कचनापुर जनमुखि सामुदायिक बनमा सामुदायिक घर , सो घरमा हाल सोही वडाका ३ जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरु बस्दै आएका छन ।
सुगम जिल्लाका रुपमा चिनिने बाँके जिल्ला सुबिधा सम्पन्न जिल्लाको रुपमा चिनिदै आएको छ । तर, बाँकेको राप्तिसोनारी गाँउपालिका वडा नं. २ मा कोरोना पोजेटिभ भएका ब्यक्तिहरुको अबस्था हेर्ने हो भने लाग्छ कुनै दुर्गम ठाँउको भन्दा कम छैन । आईसोलेसन बनाईएको भबनमा न त सुरक्षाकर्मी , न जनप्रतिनिधी नै छन, नत ब्यबस्थित बासस्थान नै छ, न त स्वास्थ्यकर्मी छन । कोरोना पोजेटि बिरामीहरु स्वअनुशासनमा बसेका छन । उनिहरुको हेरचाह र उनीहरुको निगरानी स्थानियहरुले गर्दै आएका छन भने कोरोना संक्रमित ब्यक्तिहरुले पनि आफुहरु आफ्ना लागि भन्दा पनि परिवार र समाजका लागि भन्दै यस्तो ठाँउमा बसोबासगर्दै आएको बताउछन । कोरोना पोजेटिभ भेटिएका ब्यक्तिहरु आफै खान पकाउने खाने गरेका
आईतवार दिउसो नयाँकोर्सको टिम सो स्थानमा पुग्दा संक्रमित एक जना भवन बाहिर कुर्चिमा बसेका थिए भने अन्य २ जना सामुदायिक भवनको वरन्डामा वसेका थिए । सन्चारकर्मीलाई देख्ने बित्तीकै उनिहरु आफ्नो गुनासो पोख्न सञ्चारकर्मी भएतिर आए । उनिहरुले वडा कार्यालयका तर्फबाट एक बोरा चालम ल्यार छोडने बाहेक अन्य कुनै काम नभएको गुनासो गरे ।
उनीहरु केहि समय अघि नरैनापुर गाँउपालिकाको क्वारेन्टाईन हुँदै राप्तिसोनारी प्रबेश गरेका थिए । उनीहरुको स्वाब संकलन गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । अहिले उनीहरु आइसोलेसनका नाममा सामुदायिक बनको भबनमा बसेका छन । उनीहरु आफु र आफ्नो परिवारकालागि भन्दै ब्यबस्थित नभएको आसोलेसनमा बस्न बाध्य भएको बताए । उनीहरुलाई खानाकालागि भन्दै केहि खाद्यन्न स्थानिय तहबाट उपलब्ध भएको छ भने चिकित्सक र प्रहरी दिन बिराएर आउने गरेको समेत बताए ।
जेठ ३ गतेदेखि क्वारेन्टाईनमा बस्दै आएका उनीहरु पिसिआर पश्चात परिक्षण गर्दा पनि उनीहरु अहिले सामुदायिक बनको भबनमा बस्दै आएका हुन । सुरुमा बेन्चमा सुत्दै आएका उनीहरु अहिले बेडसम्म पाएको बताउछन ।
स्थानिय पुर्ण बहादुर खत्रीले भने आफुहरुले कोरोना संक्रमितलाई सामुदायिक बनको भबनमा राखेको बताए । गाँउपालिकाले अहिलेसम्म कहि ब्यबस्था नगरेको समेत जनाए ।
भौतिक संरचना कमजोर हुदा धेरै संक्रमित ब्यक्तिहरु आइसोलेसन र क्वारेन्टाईन बाट भागेको समाचारहरु सार्वजनि भई रहदा राप्ती सोनारी २ को आइसोलेसनमा बस्ने ब्यक्तिहरु भने आफ्नो सुरक्षा आफै गर्दै आएका छन ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं २ का वडा अध्यक्ष मदन वलीले गाँपालिकाले आवश्यक सहयोग नगर्दा आईसुलेन व्यवस्थितगर्न नसकिएको बताए । उनले वडा कार्यालयवाट गर्न सकिने जति व्यवस्थापन भई रहेको दाबि गरे ।